नांगिनुबाहेक जीवनमा धेरै गर्नु छ: कास्कीदेखि डलासको स्ट्रिप क्लबसम्म « Pana Khabar
कथा कसको हुँदैन ? जसले जिन्दगी पाएको छ वा जसले जिन्दगी पाएको छैन–– सबैको । सबैलाई आफ्नो कथा ठूलोे लाग्छ । एउटा अरबपति होस् या बगरमा गिट्टी कुट्ने मानिस, खोलामा बगिरहेको ढुंगा होस् या खोलैमा अल्झिरहेको काठको मुढा– सबैका आफ्ना कथा हुन्छन् । दुःख–सुखका कथा ।
फेरि उनले सोधिन्, “मेरो सेक्सको भिडियोको बारेमा के भन्नुहुन्छ ? यदि तपाईले मेरो बारेमा केही लेख्नुभयो भने पनि त्यसले के फरक पार्छ र ? मानिसहरूले मेरो बारेमा पढ्छन् अनि मलाई नराम्रो सोच्छन् ।”
उनी हेम्जा (कास्की)को ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मेकी हुन् । नाच्नु उनको सानैदेखिको शोख थियो । विद्यालयका हरेक सांस्कृतिक कार्यक्रममा उनले भाग लिने गर्थिन् । ती दिन साह्रै रमाइला थिए । साथीहरूसँग नृत्य गर्न नेपालका विभिन्न स्थान गइन् ।
बिन्दु सम्झिन्छिन्, “उनले आत्महत्या गर्छु भनेका थिए तर मैले सम्झाएँ । टमले मलाई दिदी सीताका केही नांगा तस्बिर देखाउँदै कुनै जवान केटाका लागि आफूलाई छाडेको आरोप लगाए । मैले सबै सत्य ठानें तर त्यहाँ कुरा ठ्याक्कै उल्टो रहेछ । दिदीलाई उनले स्ट्रिप क्लबमा काम गर्न कर गरिरहेका रहेछन् । उनी मलाई अमेरिका लिएर जान चाहन्थे किनभने मजस्ता जवान केटीले उनका लागि धेरै पैसा जम्मा गर्न सक्थी । अहिले म महसुस गर्दैछु– आखिर मैले दिदीको कुरा किन सुनिनँ ? शायद म अमेरिका आउन धेरै नै उत्सुक थिएँ । तर, अफशोच ! म टमको गलत योजनामा फसिसकेकी थिएँ ।
मेरा आमाबुवा गरिब हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू सोच्नुहुन्थ्यो– टम हामीजस्ता गरिबलाई सहयोग गर्ने भगवान् हुन् । आखिर मैले जीवनको सुरुवातदेखि चिनेको मानिसलाई म विश्वास नगरूँ पनि कसरी ? हामी सबैले उनको विश्वास ग¥र्यौं । उनले दिएका पन्नाहरूमा मैले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गरें । अमेरिका ? हो म साँच्चै आउन चाहन्थें तर मैले यस्तो मूल्य चुकाउनपर्छ भन्ने सोचेकी थिइनँ । अमेरिका आइसकेपछि परिस्थिति बिग्रिँदै गयो । मैले बुझेसम्म टमले मलाई यहाँ पढाउन ल्याएका हुन् । त्यही धरातलमा टेकेर मैले राम्रो परिवार र सुखी जिन्दगीको आशा गरें । म आफ्नो परिवारलाई गरिबीको दलदलमा फसेको देख्न चाहन्नथें । सबैभन्दा रोचक कुरा त– जसलाई मैले २० वर्षदेखि चिनेकी थिएँ, उनैको कारणले म अर्को दलदलमा फसें ।
उनले मेरा सबै सपना पूरा गरेर नर्स बनाउने वाचा गरेर मलाई यहाँ ‘के १’ भिसा (विवाह गर्नका लागि दिइने भिसा)मा लिएर आए । म र मेरो परिवार निकै खुशी थियौं । हामीले सोच्यौं कि म अमेरिका पढ्नलाई जादै थिएँ । तर, म उनको यौन चाहना पूरा गर्ने दासी र उनकी श्रीमतीको रूपमा जान लागेको कुरा थाहा थिएन ।
तीन महिनासम्म उनले भनेको काम गरिसकेपछि मैले नेपाल फर्कन चाहेको बताएँ । तर, उनले मलाई मेरो नग्न भिडियो र फोटो परिवारलाई देखाइदिन्छु भन्दै धम्क्याए । बाध्य भएर त्यसलाई निरन्तरता दिएँ । त्यसबाहेक सबैभन्दा ठूलो कुरा त उनीसँग मेरो पासपोर्ट र सबै कागज थिए । यहाँको व्यवस्था कस्तो थियो भन्ने कुराको मलाई कुनै जानकारी थिएन । प्रहरीको सहायता कसरी लिने भन्ने कुराको समेत मलाई कुनै जानकारी थिएन । त्यो मेरो लागि छुट्टै संसार थियो । मेरो जीवन नर्क भइसकेको थियो ।
टन्न पैसा कमाएको सहज जीवन हुँदेन । मैले जसरी पनि एक रातको हजार डलर कमाउनु पथ्र्यो । नत्र टमले बेल्टले हिर्काउँथे । आफ्नो पिसाब पिउन बाध्य पार्थे । उनी दिनभरि घर बस्थे, हरेक रात पिउँथे । काममा जाँदा मेरो खुट्टामा एकदम पीडा हुन्थ्यो । मानिसहरूका लागि नांगो हुनुपथ्र्यो । म दिनको १२ घण्टा, हप्ताको ५ देखि ७ दिनसम्म काम गर्थें । मैले कति कमाएँ र कति जनासँग यौन सम्पर्क राखें भन्ने कुरा उनले टिपेर राख्थे । मैले बिनापैसा उनको खुशीका लागि पनि यौन सम्पर्क राख्नुपथ्र्यो । उनलाई त्यसैमा सन्तुष्टि हुन्थ्यो । म पैसाको लागि मात्रै नाच्थें । उनले मलाई पिउन बाध्य गराएर मेरो सेक्स भिडियो बनाए र पछि त्यही भिडियोको बहानामा धम्क्याउन थाले । उनका गतिविधिबाट म त्रसित भइसकेकी थिएँ, त्यसैले उनले जे भन्छन्, त्यही गर्नुबाहेक मसँग अरु कुनै विकल्प थिएन ।
लामो समयसम्म चुप लागेर उनले भनेको मानें । तर, म उनको यातनाबाट झनपछि झन् पीडित हुदै गएँ । म पाँच पटकसम्म अस्पताल भर्ना भएँ । मसँग यौन सम्पर्क गराउन उनी कलेज पढ्ने केटा र आफ्ना साथीहरू ल्याउने गर्थे । मैले उनीसँग भन्दा अरुसँगै यौनसम्पर्क राख्नु उचित ठानें । कमसेकम मलाई उनीहरूले आफ्नो इच्छा पूरा भएपछि पिट्न त पिट्दैनथे । मलाई एक्लै छोडिदिन्थे । मैले आफैंलाई मार्ने कोसिस पनि गरें । धेरैपटक मलाई मानसिक अस्पतालमा लगेर राखियो । परामर्श लिएर औषधि खाएँ । अहिले मैले उनलाई छोडिसकेकी छु र आफ्नो जीवन कुनै राम्रो मानिससँग बिताउने सोचमा छु । मैले नर्सिङ कलेजमा पनि भर्ना लिएँ । अहिले मसँग पम्पकिन नाम गरेको कुकुर छ, जसले मेरो ओठमा मुस्कान ल्याउँछ ।
टमलाई छोडेदेखि म उनीसँग सम्पर्कमा छैन । उनले मेरो लागि नेपालमा गरेको सहयोगप्रति आभारी छु ।”
हामीले बिन्दुलाई सोध्यौं, “नर्सिङ प्रमाणपत्रकै आधारमा पहिलेजस्तो आम्दानी नभए तपाईंले पुनः नाच्ने पेशालाई निरन्तरता दिनुहुन्छ ? किनभने तपाईंले नर्सिङ गरेर एक वर्षमा कमाउने पैसा स्ट्रिपिङ गर्दा एक महिनामा कमाउनुहुन्छ ।”
जवाफमा बिन्दुले भनिन्, “म थाकिसकेकी छु । नर्सिङ प्रमाणपत्रका लागि ज्यान दिएर पढिरहेकी छु । मैले जीवन बिताउन राम्रो मान्छे पनि पाइसकेकी छु, जसले मलाई धेरै माया र ख्याल गर्छ । मेरो जीवनमा ऊ नआएको भए र मेरो बस्ने ठाउँ नभएको भए शायद म फेरि त्यही पेशामा फर्किन्थें होला । त्यो काम नराम्रो होइन तर गाह्रो भने हो । धेरै मानिसहरूको अगाडि नांगिन ठूलो हिम्मत चाहिन्छ । मैले मेरो पढाइलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । खान, बस्न र परिवारलाई सुखी राख्न पाए मलाई जुन काम पनि ठीक छ । नांगिनुबाहेक मैले जीवनमा अरु धेरै काम गर्न बाँकी छ ।” (यो सामग्री ‘गुन्द्रुक पोस्ट’को अंग्रेजीबाट अनुवाद गरिएको हो ।)
प्रकाशित मिति :२०७४ फाल्गुन ६ ,आइतबार